Dad gaaraya 46 Qof oo ku dhintay Qarax ka dhacay Masaajid ku yaalla Afganistan
HomeWararka CaalamkaDad gaaraya 46 Qof oo ku dhintay Qarax ka dhacay Masaajid ku yaalla Afganistan
October 8, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Qarax Ismiidaamin ah, ayaa Jimcihii maanta lagu qaaday Masjid ku yaalla Gobolka Kunduz ee Waqooyi -bari Afgaanistaan, waxaana ku dhintay 46 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 140 qof, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka Bakhtar ee dawladda.
Muuqaalo fiidyow ah ayaa muujinaya maydad ku jira burburka gudaha masaajidka oo ay adeegsadaan dadka ka soo jeeda Shiicada ah ee laga tirada badan yahay.
Ma jirto koox markiiba sheegatay mas’uuliyadda. Qaraxan ayaa daba socda dhowr weerar oo uu ku jiro mid lagu qaaday masaajid ku yaal Kabul, toddobaadyadii la soo dhaafay, kuwaas oo qaarkood ay sheegteen mintidiinta Muslimiinta Sunniga ah ee Dawladda Islaamka.
Weeraradan ayaa hoosta ka xariiqay caqabadaha dhanka amniga ee Taliban , oo dalka qabsaday bishii August tan iyo markaasna waxay ka wadeen hawlgallo ka dhan ah unugyada Dawladda Islaamka ee Kabul.
Wakaaladda wararka Bakhtar oo ay maamusho wasaaradda warfaafinta ayaa sheegtay in 46 qof ay ku dhinteen qaraxa 143 kalena ay ku dhaawacmeen.